Antoka ahombiazana ny mpampianatra misitraka zo sosialy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mitohy ny fandalinana ny lohahevitra hoe « Ny maha izy azy ny sekoly katolika manoloana ny fitsinjovana ara-tsosialin’ireo mpanabe miasa eo anivon’ny sekoly katolika ». Talen-tsekoly miisa 20 tato anatin’ny diosezin’ny Moramanga indray no nisitraka ny fampiofanana nomen’ny Cnaps. nanomboka tamin’ny 2015 dia nisafidy manokana hiara-hiasa amin’ny CNaPS ny Dinec. Diosezy faha-15 nanatanterahana an’izao fampiofanana izao i Moramanga.
Adidin’ny mpampiasa ny mampiditra CNaPS ny mpiasa tsy an-kanavaka
Naharitra roa andro ny fampiofanana nokarakarain’ny Cnaps. Rasoanaivo Didier talen’ny fenitra sy ny fikarohana eo anivon’ny CNaPS no nitarika ny delegasionan’ireo mpampiofana Andriamatoa. Nanampy azy tamin’izany ireo lehiben’ny sampandraharaha isan-tsokajiny. Nanotrona koa ny talen’ny masoivoho Cnaps Moramanga.
Tanjona ny hahaizan’ny talen-tsekoly mikirakira ny lalàna manan-kery mikasika ny fitsinjovana ara-tsosialy sy ny lalàna mifehy ny asa sy ny fampiharana azy ary ny fomba hampiasany azy.
Misy tamin’ireo talen-tsekoly no efa mahafantatra ny lalàna velona, tao koa ireo vao nampahalalaina fa zo fototra ny fananana fiahiana ara-tsosialy ary adidin’ny mpampiasa ny mampiditra ny mpiasany ho mpikambana CNaPS mba hahafahan’ireo olom-pehezina misitraka ny zony ara-tsosialy.
Nojerena ny olana manoloana ny fampiharana an’io lalàna io noho ny antony samihafa ary ny fiantraikan’izany lalàna izany amin’ny fiainana ankehitriny. Mety hisy manko ny sekoly tsy maharaka an’io fitsinjovana ara-tsosialy io. Fotoana nametrahan’ireo tale ireo fanontaniana manitikitika momba ny fiahiana ara-tsosialy. Nanolotra vahaolana hatrany ireo tompon’andraikitra avy main’ny Cnaps. Tokony hatao ho tanjona ny hahitana vahaolana amin’ny fanolorana ny tolo-dalàna avy amin’ny tsoa-kevitra manoloana ny zava-misy ao amin’ny diosezy iray. Entin’ny tompon’andraikitra nasionaly hitadiavana vahaolana maharitra izany. Mety hiafara amin’ny fanolorana ny tolo-dalàna amin’ny tompon’andraikitra rehetra, hanatsarana ny lafiny sosialy. Mampivelatra ny mpiasa ao aminy ny fanolorana ny tolo-dalàna hoentina manatsara ny zo sy ny sosialin’ny mpiasa amin’ny sekoly katolika.
Vitsy ny sekoly katolika ato anatin’ny diosezin’i Moramanga ahitana sekoly miisa 26 ary mpampianatra 104. Somary midadasika ihany ny diosezy satria Anosibe An’Ala no any Atsimo, any Atsinanana ny tanànan’i Beforona, any Avaratra Andaingo ary any Andrefana kosa i Beparasy Anjiro. Distrika valo no mandrafitra ny diosezin’i Moramanga.
Rehefa misy sanatria ny tsy fanarahan-dalàna amin’ny lafiny rehetra dia tsy mitsahatra ny manentana ireo talen-tsekoly ao anatin’ny diosezy iandraiketany i Masera Razanamamala Geneviève, Didec Moramanga. Nambarany fa zava-dehibe ny fifampitsinjovana eo amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa. Ny fanajana ny zon’ny mpiasa sy ny fahazahoana ny fiahiana ara-tsosialy dia manentana sady mandrisika ny mpiasa hiasa tsara ary mampandroso ny sekoly. Isan’ny antony mahatonga ny mpiasa very zo ny fanefan’ny mpampiasa ampahany ihany amin’ny latsakemboka, misy koa ireo manafina ka manao fanambarana filazan-karama tsy araka ny tokony ho izy. Manoloana izany dia nanentana ny mpampiasa rehetra i Frère Andrianatrarana José Florent, talen-tsekoly Saint Antoine ao Anosibe An’Ala, fa « Ny tale rehetra dia tokony hampiditra ny mpiasany tsy an-kanavaka ao amin’ny Cnaps ary hanao ny fanambarana filazan-karama amim-pahamarinana sy amin-kitsi-po satria izay no miantoka ny fiahiana ara-tsosialy sy ny ho avin’ny mpanabe.»
Etsy an-danin’izay isan’ny voalaza nandritra ny fifanakalozan-kevitra fa efa tsy mifanaraka amin’ny toetr’andro ankehitriny intsony ny lalàna mifehy ny fiarovana ara-tsosialin’ny mpiasa eto Madagasikara. Saika lalàna nifanaraka tamin’ireo nampiharina tamin’ny mpiasa tamin’ny taona 1969 no iainana. Mitety diosezy izao fampiofanana atao amin’ny talen-tsekoly katolika izao ka any toliara ny andiany manaraka.
« Tapitra jerena akaiky avokoa na ny ora fiasanan’ny mpampianatra na ny programma ary tsy leferina mihitsy ny gaboraraka izay no antony mahatonga ny fahombiazana ho an’ny sekoly katolika. Koa tsy mahagaga raha misongadina hatrany izy amin’ ny voka-panadinana » hoy Sœur Razanamalala Géneviève Didec Moramanga. Ary kasinga iray fanampiny hitehirizana ny vokatra tsara ny fisian'ny mpampianatra misitraka ny zo soialy. Isan’ny ezaka hatao koa ankehitriny ny mampanaja ny zo sosialin’ireo mpiasa misehatra an’ivon’ny tontolon’ny fampianarana.
Araraotina ihany koa ny fotoana nanaovan’ireo mpitantana sekoly ao anatin’ny diosezy nifampizara tamin’ny tompon’andraikitra nasionaly notarihan’I Mompera Jules Ranaivoson.
Nanangona Cathy sy JRR